Claws iphepha kuyinto kahle kulula, kodwa kukhona ingqikithi izinhlobo ezintathu ezihlukene yokukhiqiza izimpiko lephepha. Ngokuvamile lolu hlobo ngenalithi libizwa origami. Kuyikhono lasendulo, ngawo iphepha angenza noma isiphi isibalo bonke osayizi, futhi ngezinye izikhathi wenze Ukuthutha kwakhe (ngakho, isibonelo, zingenziwa ezinemibala iphepha frog, okuyinto, lapho sicindezelwe, ngeke sifinyelele). Ngakho, ake udlulela indlela yokwenza iphepha izimpiko.
Indlela eyodwa: ngaphandle glue sikelo
Okokuqala, akufanele sicabange ukuthi lezi izipikili ngeke liphuke ngokushesha, ngoba abanayo ethe njo! Udinga nje iphepha ilungelo mpahla amathiphu owangaphakathi uzipho, kuyobe ukugcina ezakheke futhi kuyoba omuhle ukugcina on izinzwane zakho. Ukuze wenze kube sobala kanjani uzipho aphume iphepha inqubo nge ucezu ababethi ifomu sub-ayithemu, ukwenza ukuthi ulandele komunye nomunye ukulandelana efanayo lapho zivela.
Thatha ucezu square ukuze emikhawulweni yaso wabheka phezulu naphansi, ngamanye amazwi, ukuze ishidi iphepha kuyinto rhombus.
Thatha iqabunga esikhwameni, futhi nini ukukwenza, zama emunweni, lapho sihlelwe ukubeka uzipho. Ngamanye amazwi, kulesi sigaba wenza isizinda uzipho, okuyinto Isigaxa ngasesinqeni se okuhlanganisa umunwe wakho.
Ngomusa bend imikhawulo nimkhiphela, kokuwalungisa, futhi ngesikhathi esifanayo nokugcina uzipho, ngakho-ke akaphelelwa ezakheke ngayo. Uma wenza kanjalo it right, ukuze uzipho angawi ngaphandle futhi kuyoba kuhle ahlale phezu umunwe wakhe.
By endleleni, le ndlela muhle kulabo abanokuhlangenwe nakho ekwenzeni izimpiko ezinjalo, njengoba kusukela abantu abambalwa kuqala uthole ukuba nizenze kahle, kudingeka ukuqeqeshwa. Eqinisweni ezithakazelisayo: ngale ndlela e-America for the holiday of All Saints (Halloween) abentwana benzani ngokwabo izimpiko eminweni razukrashivaya kubo (noma ukuzulazula nje entanyeni).
Indlela ezimbili: sikelo Yesigcilikisha +
Le ndlela kuyinto ephelele noma ubani oyenzayo izinzipho ngokokuqala noma umane abaqondi ukuthi ukwenza izimpiko iphepha ngaphandle glue sikelo. Le nqubo libhekene alula esiyingqayizivele: imizuzu eyishumi noma eyishumi nanhlanu yomsebenzi ungenza izimpiko kuwo wonke iminwe. Ukuze le ndlela, kuzodingeka: amakhasi amaphepha, inani okuyinto ezokwenzeka inani izimpiko kuhlelwe, sikelo (kufanele kube ebukhali ngokwanele, ngakho ungathathi labo "ukuhlafuna" iphepha), kanye ne-glue stick asezingeni elifanele (akulona ukuthi ezigcotshwe obukhulu izingqimba noma kungekho ukugeleza). Ngakho ake ngiqale.
Songa ephepheni aphume Isigaxa, okwakubekelwa abagqoke kahle emunweni wakho, kodwa ngeke untengantengiswe.
I amathiphu unamathele emhlabathini, kufanele uthathe ngokucophelela nge sikelo.
UKUXHUMANA uzipho, ukuze wonke inhlaka kwaba ngaphansi ungqimba iphepha, njengoba inamathele futhi abuthe ukungcola esihle nothuli, futhi ngeke konakalisa umbono jikelele uzipho.
Ingabe zonke izinyathelo ezingenhla njengoba izikhathi eziningi njengoba ufuna ukuba izimpiko.
Ithiphu: Uma une isifiso ukupenda izinzipho, ukulinda kuze kube glue bome kubo, ngoba upende "iflothi" lapho ungqimba ingcina kuyoba.
Indlela ezintathu: ngaphandle sikelo, kodwa ingcina
Lezi izimpiko uyinqaba ikakhulukazi, njengoba inamathelisiwe hhayi kuphela inhlaka, kodwa engonxantathu owangaphakathi uphela. Ngaphambi kokwenza iphepha izimpiko, qiniseka ukuthi izinga ezinhle glue musa ukumosha umsebenzi.
Thatha ephepheni kusuka Isigaxa encane, zama awubeka umunwe wakhe.
Con iphepha glue amalunga omzimba.
Songa emakhoneni nimkhiphela ezansi futhi lezo nabo ukuze ungagxambukeli.
Ithiphu: musa gqoka esenziwe izimpiko izinzwani kuze inhlaka yome ngokuphelele, ngoba uma uqala ukususa uzipho ngomunwe, it is likhubazeke.
Uma wenza kanjalo it right, izinzipho zakho kuyoba baqaphele ukuba bangaweli ngeminwe yakhe. Uma unesifiso ukuhlobisa izinzipho, ungakwazi ukudweba kubo, bopha ne imicu ezinemibala noma ngocingo oplesti ubuhlalu. Khetha ukuthi iyiphi indlela indlela yokwenza iphepha izimpiko, futhi uthole ukusebenza!
Ubucwebe, imihlobiso ngezandla zakho. imihlobiso Homemade kusukela ubuhlalu, ubuhlalu, indwangu, isikhumba
Cap Wezingane ngezindlebe spokes: isinyathelo ngesinyathelo incazelo
Ekibany ekwindla: ezinye izibonelo ezithakazelisayo umsebenzi
Summer izikhwama ngezandla - kulula!
"Kaun" (ntambo): incazelo, ukwakheka, umakhi, imibono kanye nokubuyekeza
Isipho esihle izingane kanye nabantu abadala - kweqembu Balloons
Umsebenzi wezinwele: likhono lelitsite
Peritonitis: izimpawu, izimbangela, ukwelashwa.
Imishini imoto izifanekiselo nemithetho heraldry
Indlela yokucima i-soda ngeviniga futhi kuyini?
Central ukukhiya nge-remote control - lula futhi ephephile
Kusho "Rioflora ibhalansi." Yokusetshenziswa
Kwasemini okumnandi: ama-cutlets kusuka ku-bream
"Tavern ezintathu Minnow" (Kazan): incazelo, ikheli, ukubuyekezwa
Ultrasonic inyoni oxosha. Scares namagundane, amagundane, amavukuzi
Ukuya kuphi ngoNovemba. Amanothi omhambi ohambile